8.2 Edition ee walxaha qoraalka - Geofumed
Laga soo bilaabo cutubka 16 ee kor ku xusan waxaanu ka qabannaa arrimaha la xidhiidha daabaca walxaha sawirka. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan halkan ka arki karnaa qalabka la heli karo si loo saxo walxaha qoraalka ah ee aan hadda abuuray, maaddaama dabeecaddoodu ay ka duwan tahay waxyaabaha kale. Sida ka dib waxaa lagu arki doonaa, waxaa laga yaabaa in la kordhiyo line a ina xiiseynaya, si chamfer cidhifyada geesoolayaasha ah ama si fudud isku shaandheyn spline ah. Laakiin in ay dhacdo waxyaabaha qoraalka, baahida loo qabo in isbadal dhici kartaa isla markiiba ka dib markii ay abuurka, sidaa darteed waxaan leenahay in la sameeyo marka laga reebo in this arrimaha arrintan haddii aan rabno in aan sii wado mabda'a nidaamsan ee ka fudud u socday isku dhafan iyo isku xirka arimaha xiriirka macquulka ah. Aan aragno
Haddii aan wax ka beddelo qoraalka ah ee line a, ka dibna waxaan ku labanlaabtaa kartaa riix qoraalka, ama wax ka qoraan "DDEDIT" amarka. By kaakicin amarka, Autocad na weydiiyo in aan tilmaamaya la sanduuqa doorashada si ay u edit, in sidaas la sameeyo, shayga lagu duruufaysnaa doonaa leydi la dulqabo diyaar sidaas darteed waxaan ka beddeli kartaa qoraalka si la mid ah sida aan la processor kasta erayada. Haddii aan double-riix mouse ka, waxaanu isla markiiba edit sanduuqa.
In the "Text" kooxda "Record" tab jira laba badhamada in sidoo kale u adeegtaan si edit walxaha in line a. The "qiyaasta" ama ay u dhigma, ee "Textoescala" toggles button amarka, iyadoo talaabo kaliya, size ee walxood qoraalka. akhristaha ugu dhaqsaha badan soo ban dhigi doonaa in dhammaan sixiddiisa amarradiisa, noocan oo kale ah, waxa ugu horeeya ee aan ku weydiino waa in xil Autocad ama walxaha in wax laga badalo. Waxaa sidoo kale caadaysteen in ay in, mar aqoonsaday alaabta, ku dhameysan doorashada la "GELI" muhiimka ah ama badhanka mouse xaq. Xaaladdan, waxaan dooran karnaa hal ama dhowr xaraf oo qoraal ah. Marka xigta, waa in aan tilmaamnaa dhibic asaasi ah si loo cabbiro. Haddii saxaafadeed "GELI" deselected, markaas barta gelinta shay qoraal kasta waxaa loo isticmaali doonaa. Ugu dambeyntii, waxaan yeelan doonaa inuu inaga sii hor afarta fursadaha si aad ucabirto suuqa kala amarka: height cusub (taas oo ah default), sheeg height of warqad (taas oo khusaysaa qoraal walxaha la hantida annotative, kaas oo wax ka baran doonaan hoosta), ciyaarta ku saleysan qoraalka hadda jira, ama tilmaamaya miisaanka cabbirka. Sida aan ku arki karno fiidiyow hore.
Waayo, ay qayb ka, ah "cudurdaaraan" ama amarka "Textojustif" button kuu ogolaanaysaa inaad bedesho dhibic galinta qoraalka aan ka dhaqaaqin shaashadda. Xaaladdan oo kale, fursadaha suuqa kala amarka la mid yihiin kuwa ka hor soo bandhigay oo sidaas daraaddeed saameynta ay isticmaalka sidoo kale waa u siman yihiin. Si kastaba ha noqotee, bal aynu eegno doorashadan suuban.
Ilaa iyo hadda, laga yaabee akhristaha ayaa hore u dareentay maqnaanshaha walxaad si uu u dooran font mid ka mid ah buugga ballaaran in Windows sida caadiga ah waxa kale oo iyaduna ka mid ah qalabka ay ku riday, dhuuban, iyo wixii la mid ah. Maxaa dhacaya waa in fursadaha kuwan waxaa ay gacanta ku Autocad iyada oo "Styles Text" in aanu ugu dhakhsaha badan arki doonaan.
Post Previous«Previous 8.1.1 Fields ee qoraalka
Post Next 8.3 Hababka qoraalka ahNext »